Siyaasad Aan Jiho Lahayn. W/Q: khaalid maxamwed aadam | IctiraafNews.com
Siyaasad Aan Jiho Lahayn. W/Q: khaalid maxamwed aadam
Wanaag fahaney siyaasad iyo siyaasi. Waa maxayse xusbi? Xusbi waa middow ama isku tag ay ku kulmaan koox siaasiyiin isku aragti ka ah nolosha
Siyaasadu ma ah khiyaamo, been, wax is daba marin, dulmi iyo shaqsi weerar toona fahan la’aanteeduna waxay dhalisa jahwaree bulsho kaaso ragaadiya dhamaam horumarka nololeed. Hadaba wax is weydiin mudan waa maxay siyaasadi? Siyaasadi waa hanaan lagu maamulo bulsho kaaaso ku qotoma run daacadnimo cadaalad qorshe iyo himilo salka ku haysa aragti nololeed oo fog si loo horumariyo adeegyada lagam maarmanka u ah koboca iyo kor u qaadista nolosha bulshada sida amniga, dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga, wax soosaarka, ilaalinta deeganka, daris wanaag iyo wada noolanshaha dalalka adduunka.
Garaney siyaasad, siyaasiguse waa maxay? Siyaasi waa qof han, hiigsi iyo himilo ka leh nolosha una ban bax inuu
ka qeyb qaato horumarka dalkiisa iyo dadkiisa kana duuleya baahida bulshadiisa isagoon ku xad gudbeyn diinta, dhaqanka iyo datuurka ummadiisa.
Wanaag fahaney siyaasad iyo siyaasi. Waa maxayse xusbi? Xusbi waa middow ama isku tag ay ku kulmaan koox siaasiyiin isku aragti ka ah nolosha ama isku mabaaddi ah. Tusaale, xisbiga shaqaalah ee dalka ingriiska siyaasiyiinta ku jirta waxay ka mideysan yihiin aaminsanyihiin in la horu mariyo shaqaalaha iyo bulshada danyarta ah halka xisbiga koonsegatifku dhiirigaliyaan tijaarta iyo lacagleyda. Dhamaan xubnaha siyaasiyiinta ah ee ku kal jira labadan xusbi waa dad ku kal duwan arimaha aan soo sheegnay sida darteed ma dhacdo in siyaasi ka tirsan mid uu u wareego xisbi kale maxaa yeelay waxay markooda hore ku kal duwan yihiin aragtida horumarka ee dalkooda. Taasi waxay sababtey in siyaasadoodu noqoto mid mabdda leh lan yaqaan halkey u socoto iyo halkey ka socot dadkuna ku kal doortaan barnaamijyada ay soo bandhiggan haddaba mid kay door bideyaan.
siyaasiga soomaaliland waa siyaasi mabdda, qorshe iyo aragti nololeed midna aan lahayn kaliyase u socda mansab,maal iyo magac waan sababta marwalba loo arkeyo iyaasi shaley ka soo hadleyey meel kuna wadey meel oo haddan halku ka soo wadey maanta ku sii wada difaacayan kii uu shaley dhaliileyey. Waa siyaasi intuu xilka hayo dilaal ah kana baayac mushtareeya danaha ummadiisa. markuu xilka ka dagana looyar ah oo iska dhigaya mid u dooday xuquuqdooda isagoo dan gaara leh . waa siyaasi dabada ku haya qabiil oo aan awood ulahayn aqoon iyo karti inuu bulshada ku kasbado. Waa siyaasi aragti dhow oo had iyo jeer eega uun soomalida dhexdeeda balse aan ku hamiyin adduunka wax la qeybso. Waa siyaasi shaqo doon ah. Waa siyaasi u yimid ku noolow kumase fikiro noole. Waa siyaasi reer u ah danjire. Waa siyaasi PHD sita walise badow ah. Waa siyaasi dab ka warwar qab. marba wax isku xisbi ah intii isku dan ah, kii ka waaya dantiisuna wuu ka diga rogtaa. Waa siyaasi aan xeer qaban. Kolba kii jooga sharciga sameysta. Waa siyaasi aan aqoon banne booska. Waa siyaasi ku guura uun dadkiisa balse aan dajin aqoon. Waa siyaasi dab dhilif ah oo dibadda laga hag. waa siyaasi ka baqa diinta shisheeye dartii. Waa siyaasi muxaafid nimadda difaac u haysta balse aan fahmin in isgagu yahay ka ugu dhow ee hadey wax qaldanyihiin toosin lahaa. Waa siyaasi mucaaridnimdad u haysat caay fagaare balse aan si cilmiyeeysan oo caqli ku dheehan yahay u sheegin dhaliisha. Waa siyaasi tuulo jooga oon u haysan inuu qaran hor joog oo dufaaca uun degaankiisa. Waa siyaasi aan jiho lahayn, siyaasad jahawareetey iyo shicib shawakhay oo shan kasta taagan.
waa quraalkii siyaasiga dada yar oo iden leh xiiso wacan iyo kabadal wanaagsan oo ku sucuta qufkasto siyaasada taageraa maanta ku soo bire fikirkaaga adoodo raacayaa
lasoco wxkasto cusub